Ukubonelela ngeFirmali ekumgangatho ophezulu 3K Carbon Fibre Plate
Ingcaciso yeMveliso I-Hexagon enkulu yokuzitshixa encinci yesitshixo se-flange nuts Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle kakhulu. Ngama-nuts sinamantla amaninzi e-aluminium, Amantongomane eNtsimbi , i-hexagon yamandongomane kunye ne-nylon hexagon nut esitokhweni....
Intshayelelo yeMveliso Ubungakanani besiko Anodizing Round Aluminium Standoff I-Aluminium Standoff ithathwa ngokubanzi njengohlobo olunye Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam . Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical,...
Ingcaciso yeMveliso Ixabiso lentengo yomtya engasasebenziyo yisiqingatha sesokethi Izikhonkwane zensimbi ezingenasiseko ziyimfuneko ebalulekileyo yemihla ngemihla ejikeleze thina. Ndiyakholelwa ukuba ucinga njalo. Izikhuselo zeNtsimbi engenamandla . Kodwa umbala wabo awunanombala njengee- Aluminium Screws .Senziwe...
Ukuthengisa okushushu kwe-Octagonal Carbon Fibre Boom Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yekhabhoni inezinzuzo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-kutu, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi kwii-kites, imodeli yomoya ohamba ngeenqwelomoya, iibhloksi zesibane, izixhobo zePC,...
Ukuchaneka okuphezulu kombala weAluminiyam Hex socket yentloko Intshayelelo yeMveliso Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini....
Ingcaciso yeMveliso Imveliso ethengiswa ngqo kuMziveliso iNylon Standoff M3 ixabiso elincinci I-Nylon Hex Spacers / Screws / Nuts Assorted Kit, isebenza kwindawo ezininzi. Zonke iimveliso zenziwe yinylon eqinileyo, Inamandla, ayichasanga, icocekile kwaye iyaphatheka, kwaye kulula ukuyifaka kwaye yomelele...
I-M3 bolt hex intloko ye-aluminium screws Intshayelelo yeMveliso Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Isikulufu sekomityi yentloko...
Ukubonelela ngeFirmali ekumgangatho ophezulu 3K Carbon Fibre Plate Inkcazelo : Iphepha elipheleleyo leCarbon Fibre Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Ukukhumbula : pls usithumelele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka sazi ubungakanani bakho kunye nobukhulu :) Kananjalo...
Ingcaciso yeMveliso ukusika ii-cnc ii-organic sheet zesikhombisi Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo elungileyo....
Ingcaciso yeMveliso I-CNC isike iziqwenga zephepha le-3K lekhabhoni Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo...
I-M3 I-Standoffs yabasetyhini ababhinqileyo I-Aluminium ebunjiweyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Okokuqala, ikholamu ye-rivet nati iyahlulahlulwe ibe ngumtya we-hole nati kunye...
I-Hobbycarbon 3k twill matte carbon fiber iibhubhu Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yekhabhoni inezinzuzo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-kutu, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi kwii-kites, imodeli yomoya ohamba ngeenqwelomoya, iibhloksi zesibane, izixhobo zePC,...
Ingcaciso yeMveliso Umgangatho wokukhanya wombala we-Muti-colour Flat Head Aluminium Washers Kwinto yokuhlanjwa kwealuminiyam, ngenxa yezinto ze-aluminium, inokufakelwa imibala emininzi.Ithengise ngokushushu emarikeni. Isitokhwe sethu esiqhelekileyo se Washer kubandakanya iAluminiyam Ibala leNkunkuma iNew Washer ,...
Ingcaciso yeMveliso Ivenkile enkulu yenylon ejikeleze iintloko ezijikelezayo entloko imnyama I-Nylon okanye i-Screws zethu zeplasitiki kubandakanya i-Button head Nylon Screw kunye ne-Socket head nylon screw. Izikere ze-Nylon zifikeleleke kakhulu kwaye ziyasebenza, zibalulekile kubomi bethu. I-screws ze-Nylon ziimpawu...
Ingcaciso yeMveliso I-M3 I- Button yensimbi engenasici Izikhonkwane zensimbi ezingenasiseko ziyimfuneko ebalulekileyo yemihla ngemihla ejikeleze thina. Ndiyakholelwa ukuba ucinga njalo. Izikhuselo zeNtsimbi engenamandla . Kodwa umbala wabo awunanombala njengee- Aluminium Screws .Senziwe ngathi zinikezelwe imibala...
Ingcaciso yeMveliso Ixabiso elipheleleyo M3 Round Head Titanium Screws I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi kunama-screw aluminium ezibonakalayo. Kodwa umbala wabo awukho mibala njenge- Aluminium Screws ngenxa yokufakwa kwezinto ze-titanium....
Ingcaciso yeMveliso I-Felmale iya ku-Felmale Plastic Nylon Hex Standoffs I-Nylon Hex Spacers / Screws / Nuts Assorted Kit, isebenza kwindawo ezininzi. Zonke iimveliso zenziwe yinylon eqinileyo, Inamandla, ayichasanga, icocekile kwaye iyaphatheka, kwaye kulula ukuyifaka kwaye yomelele ukuyisebenzisa. I-Nylon iza...
Ingcaciso yeMveliso Ii-Screwer ze-Damper zesidoda esiguquguqukayo I-screws ze-Vibration damper zenziwe ngeruble kunye nezitali zensimbi Screws , ezinokuthi zinciphise ukungcangcazela nokukhonkotha isandi sezinto ezinxibileyo . Matel ukuya eskweni vibration damper ngezikhonkwane kunye nabasetyhini ukuya kwabasetyhini...
Ingcaciso yeMveliso Isinyathelo se-hardware esirhabaxa esenziwe ngeAminum Inyathelo lokuma okuqinisekileyo Ukwazisa ngemveliso: IAluminiyam iza noluhlu olukhulu lwemibala, njengoko uyazi, imibala ethengiweyo kusetyenziswa iindlela zokufikisa, abasebenzi bethu basemsebenzini abanolwazi bagcina bexhobisa inkqubo...
Ingcaciso yeMveliso I-Clutch yeAluminiyam Tube zeCarbon Fibre Tube Hobbycarbon i lokuvelisa professional ukuba ezizodwa Aluminium ngomshini Iintetho , icarbon ifayibha CNC Cutting Service nelogo Ukuprinta malunga neminyaka ngamava elishumi. IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC yinkqubo yokuvelisa eyenziwa ngokuntywila...